N Bk7 Refractive Index - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 24 Products for N Bk7 Refractive Index)
Muenzaniso Nha.: RP-COB7
Muenzaniso Nha.: RP-D05
Half Ball lenses anoshandiswa zvakanyanya pane fiber kutaurirana, endoscopy, microscopy, Optical pick-up zvishandiso, uye laser chiyero masystem. Tsanangudzo: Chinyorwa: N-BK7 Chimiro: Hafu Bhora Usage: Manyiminya, Laser, comunication, zvokurapa midziyo Dimameter: 0.2mm kusvika 200mm Kutenderera: 0.005 Kushivirira: ±...
Yakakwira index hafu yebhola lenzi
Muenzaniso Nha.: RP-HI
Half Ball lenses anoshandiswa zvakanyanya pane fiber kutaurirana, endoscopy, microscopy, Optical pick-up zvishandiso, uye laser chiyero masystem. Tsanangudzo: Chinyorwa: Yakakwira indekisi 2.0 girazi Chimiro: Hafu Bhora Usage: Manyiminya, Laser, comunication, zvokurapa midziyo Dimameter: 0.5mm - 100mm Kutenderera:...
Yakakwira index bhora lenzi
Iko kushandiswa kweiyo Yakakwira Index Girazi Bhora kunogumisira kudzikiswa kweKudzokera Kwakajeka Kureba, semhedzisiro diki ipfupi inorerutsa fiber yekubatanidza. Tsanangudzo: Chinyorwa: Yakakwira indekisi 2.0 girazi Chimiro: Bhora Usage: Manyiminya, Laser, comunication, zvokurapa midziyo Dimameter: 0.5mm - 100mm...
Muenzaniso Nha.: RP-NCBD
Kaviri concave lens ine maviri mukati mukati akakombama nzvimbo. Double Concave lens ine yakashata yakatarisana kureba. Magadzirirwo: Chinyorwa: Optical girazi N-BK7 Dhayamita: 1mm ~ 300mm Focal Legnth Kushivirira: +/- 1% Dhayamita Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Kureba Kushivirira: +/- 0.1mm Pamusoro pemhando: 40/20...
NIR Yakaputirwa N-BK7 Plano Concave Lens
Optical Girazi N-BK7 isina kuvharwa Plano Concave Cylindrical Lens
Yakasangana neplano-convex cylindrical lens, inogona kushandiswa kuumba iro elliptical danda re semiconductor laser mune denderedzwa danda. Plano-concave cylindrical lens inogona kushandiswa muzvirongwa zvekufungidzira, masisitimu ekufungidzira, zviridzwa zvemaziso, uye masystem eiyero. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7...
Iyo N-BK7 tsvimbo dzakagadzirirwa kushandiswa mune dzakasiyana siyana laser uye imaging masystem. Tsika tsvimbo dzinogona kuita kuti magumo asvibiswe, akapararira uye akasarudzika kana kukwenywa. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 0.5-300mm Kuenzana Kushivirira: + 0.0 / -0.05mm Pamusoro pemhando: 80/50, 60/40,...
Optical girazi N-BK7 Hafu penta prism
Muenzaniso Nha.: RP-NHPP
Iyo hafu-penta prism inogona kukanganisa mwenje 45 ° pasina kutendeuka kana kutenderera. Inogona kushandiswa kutendeuka kana kupatsanura mwenje. Inoshandiswa zvakanyanya muzvirongwa zvekufungidzira uye masisitimu ekufungidzira. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 1mm ~ 300mm Dhiimendi Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm...
Isina kuvharwa N-BK7 kaviri concave lens
Isina kuvharwa N-BK7 kaviri convex lens
Biconvex Lenses inogadzirwa neyakafanana convex pamusoro pamativi ese lens. Iyi mhando yemalensi ine yakanaka yakatarisa kureba uye inogadzira ese ari maviri uye vitrual mifananidzo. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 1mm ~ 300mm Focal Legnth Kushivirira: +/- 1% Dhayamita Kushivirira: + 0.0 / -0.1mm Kureba...
Njiva prism imhando yemufananidzo rotator. Mushure mekunge mwenje wapfuura nepakati, mufananidzo unodzoserwa ne180 °. Pamusoro pezvo, kana chishongo chikatenderedzwa nezvechiso chayo chekutenderedza, kona yekutenderera yemufananidzo yakapetwa kaviri kona yekutenderera. Magadzirirwo: Chinyorwa: N-BK7 Dhayamita: 1mm ~...
Kurudyi-rekona prism ndiyo yakajairika mhando prism. Inoshandiswa kutungamirazve danda remwenje pamadhigirii makumi mapfumbamwe kubva munzira yechiitiko kana kushandiswa se 180 beam retro-reflector. Ivo anowanzo akaputirwa neakasiyana machira ekupfeka kuti aumbe cubic danda akatsemura uye ruvara rwekuparadzanisa cubes...
N-BK7 Plano Convex (PCX) Magirazi
Plano convex lens inoshandiswa muma microscopes uye kukudza magirazi kuti ishandure ese anouya mwenje mwenje kune imwe nongedzo. Iyo lens inoshandiswa se lens system mumakamera sezvavanotarisa mwenje mwenje kune yakajeka mufananidzo.Lens ine zvekurapa zvinangwa futi, sekugadzirisa kweiyo hyperopia Iyo inoshandiswa...
N Bk7 Refractive Index N-BK7 Refractive Index Znse Refractive Index Girazi Refractive Index B270 Girazi Refractive Index Refractive Index Girazi Yakabatanidzwa Silica Refractive Index Auto Refractometer